Shubbadda Kama horjoogsan karno koritaanka: Gu'ga iyo Dilallada - Relief Aid Aid Masiibo
Shuruudu Kama horjoogsan karaan Koritaanka: Xilliga Gu'ga iyo Dilaalka
Home/updates/Shuruudu Kama horjoogsan karaan Koritaanka: Xilliga Gu'ga iyo Dilaalka
Iyada oo qayb ka ah socdaalkeenna 2018 Fall, waxaan ku dhex-galnay Lincoln, Nebraska. Saaxiibbada halkaa jooga ayaa sii waday inay ka wada hadlaan oo abaabulaan, iyo markii duufaantii bamku sababay daadad ku baahsan Nebraska iyo Midwest-weyn oo dhan, Shabakada Dandelion u koray si looga jawaabo. Erayadooda,
“Marka laga hadlayo xiisadda cimilada iyo nidaamyada dulmiga, Shabakadda Dandelion waxay qaadaysaa tallaabo. Koraaya xawaaraha aaminka, waxaan raadineynaa soo bixitaanka cilaaqaadka xorta ah anaga oo adeegsanayna iskaashi iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka. Shabakada 'Dandelion Network' waxay dooneysaa inay noqoto mid ka hortaga dulmiga iyo cunsuriyadda. Waxaa naga go'an inaan si ba'an u baarayno falalkayaga isla markaana lagula xisaabtamo maadaama aan ku dhex korayno beelo farxad iyo is-adkeyn leh. ”
Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno dhaq dhaqaaqa gurmadka masiibada oo iskeed u koreysa. On Shabakada 'Dandelion Network', mid ayaa heli kara codsiyada gargaarka, dadaalada gargaarka ee hadda la wadaago iyo ilaha la xiriira daadadka Midwest.
On Resine Resge Resine (Oglala Sioux Tribe), sida laga soo xigtay saraakiisha qabiilooyinka, muwaadiniinta 1,500 ayaa wali ka barakacaya guryahooda waxayna qaabdhismeedka 75-100 ay waxyeeleeyeen daadad. Dadka 500 waxay ku sii nagaadaan iyada oo aan la helin biyo la cuni karo, nidaamyada dilaaga ayaa xannibay, waddooyinka qaarna wali waa kuwa aan la qaadan karin. Guji halkan dimuqraadiyadda Hada! Daboolida ee xaaladda. Gargaarka Labada Dhinac ee Fort Collins, Qalabka Gargaarka Hore, Iyo Howlgal Oyate ayaa ku hawlanaa dadaallada iskaashiga ah. Si toos ah ula xiriir boggaggooda si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo aad u gasho. Intaa waxaa dheer, qabiilka Oglala Sioux wuxuu abaabulayaa dadaallada gargaarka wuxuuna weydiisanayaa mutadawiciinta soo socota: Caawiyayaal maamul, qandaraasleyaal, injineerro, shaqaale xirfad leh, xisaabiyeyaal / keydiyeyaal, iyo deeq qoraayaal. Weydiiso at [Email ilaaliyo]
Ma rabtaa inaad caawiso meel fog? Qabiilka Oglala Sioux Tribe wuxuu kaloo codsanayaa in dadku adeegsadaan foomkan inuu email ugu diro Madaxweyne Trump kuna boorriyo inuu siiyo gurmad federaal ah gurmadka Resine Pine Ridge iyo meelaha kale ee daadadku ku dhinteen ee South Dakota.
Hadana, meela badan oo isla dhulka ah oo ku yaal bartamaha dalka ayaa mar labaad lagu dhufanayaa, markan Dabaylaha Jiilaalka Wesley.
Gudaha, Cyclone Idai ayaa sababay dabaylo aad u daran iyo daadad ka dhacay Zimbabwe, Mozambique, Madagascar, iyo Malawi. Badweynta Hindiya iyo koonfurta Badweynta Baasifigga waxaa lagu magacaabaa cyclones, waqooyi-galbeed Baasifigga waxaa lagu magacaabaa duufaano. Si aad wax dheeraad ah uga sii akhriso #CycloneIdai dhagsii halkan iyo halkan.
Podcast Jawaabta waxay isu diyaarineysaa Xilli 2. Xilliga 1, waxay wadaageen sheekooyin ku saabsan mashruucyada soo kabashada musiibada ee bulshada u horseeday iyo tusaalayaal wadaagis musiibo oo ka timid Hurricane Sandy ee NYC, Hurricane Maria ee Puerto Rico, iyo Tubbs Fire ee Waqooyiga California.
Xilliga 2, waxay raadinayaan sheekooyin ka socda adduunka oo dhan sida dhulgariirkii 2011, tsunami, iyo burburintii nukliyeerka ee Japan; Dhulgariirkii 2017 ee ka dhacay Magaalada Meksiko; daadadkii 2017 monsoon ee Bangladesh; iyo Hurricane Florence oo ku taal koonfurta Mareykanka 2018, laakiin sidoo kale waxay u furi doontaa sheekooyinka ka dhasha musiibooyinka kale ee dabiiciga ah ee dhacay sanadihii 10 ee la soo dhaafay. Waxay raadinayaan soo saareyaal maqal ah oo hadda ku saleysan mid ka mid ah goobaha kor ku xusan, sida ugu wanaagsan ee xiriir qoto dheer u leh gobolka, inay u sheegaan sheekada. Faahfaahin dheeraad ah, oo ay kujirto lacag bixinta, waqtiga kama dambeysta ee dalabka, iyo inbadan ayaa la heli karaa halkan.
Hadaadan wali maqal Jawaabtu, fiiri qaybtani hore ilaa gujinaya halkan.
Farshaxanka iyo Ku Xiriirinta Weelka
Ma xiisaynaysaa waxtarka tamarta, kaydinta qoraxda, nidaamyada nano-grid, cabirista sawir-ka-qaadista, cabirista batteriga, qiimaha iyo waxyaabaha kale ee laga qabo iyo caqabadaha abuuritaanka kaabayaasha qoraxda ka dib musiibooyinka? Baadhid webinar-kan, asxaabtayada iyo shuraakadayada Mashruuca Cagaha. Waxaan rajeyneynaa inaan helno shabakado dheeri ah iyo soo bandhigno xirfadeed oo dhakhso leh!
Haddaad jeceshahay inaad door firfircoon ka qaadato abaabulka sii socda ee Musiibada Musiibada, iyo xitaa haddii aadan ku lug yeelan karin abaabulka socda, waxaa jira habab badan oo dheeri ah oo lagu xiriirin karo: abaabulka bandhigyada, abuurista farshaxanka / sawirada, ka caawinta teknolojiyadda internetka, abuurista agab qoraal ah, iyo waxyaabo intaa ka sii badan. Had iyo jeer waad noo soo diri kartaa emayl ahaan [Email ilaaliyo] ama kula macaamilo asxaabta shabakadda adoo adeegsanaya annaga Kooxda Facebook.
La soco Gu'ga! Aan dhammaanteen u kacno sida ubax marka roobku da'o.
w / jacayl
-Mutual Aid Aid Relief